Madaafiic Maalintii Labaad Lagu Garaacay Difaacyada Shisheeyaha Ee Qoryooley. – Bogga Calamada.com
Madaafiic Maalintii Labaad Lagu Garaacay Difaacyada Shisheeyaha Ee Qoryooley.
Guutada jugta culus ee ciidamada mujaahidinta wilaayada Sh.hoose ayaa goordhow weerar madaafic loo adeegsaday ku qaaday fariisinka ciidamada nasaarada ee duleedka degmada Qoryooley.
Dhowr madfac ayaa gudaha ugu dhacay goobta taliska u ah ciidamada cadowga iyo godadka askartooda ay kaga sugan yihiin duleedka degmadaasi.
Sarkaal mujaahid ah ayaa idaacada andalus u xaqiijiyay in weerarka duqeenta ah uu hada soo dhamaday ayna ku beegsanayen fariisinka ciidamada kufaarta afrikaanta wuxu balan qaaday in ay dib kasoo sheegi doonaan maclumaadka qasaaraha cadowga gaaray.
Diyaarad nooca helicopter.ka ah ayaa kasoo dagtay deegaanka Danow oo aan sidaasi kaga fogeen Qoryooley,lama garanayo sababta inkastoo loo maleynayo in ay daabuleyso qasaarihi kadhashay duqeenta labada maalin lagu hayo saldhigyada ciidamada cadowga ee kusoo duulay dalkeena somalia.
Ciidamadada mujaahidinta wilaayada Sh.hoose ayaa xooga saaray naafeenta cadowga iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay weeraro kala duwan oo qasaare badan geystay ay ku qaadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada gaalada ay kuleeyihiin degmada Qoryooley iyo duleedkeeda.